ICasa da Caroline, iDouro Valley - I-Airbnb
ICasa da Caroline, iDouro Valley
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguSofia
ICasa da Caroline (Indlu kaCaroline) yindlwana yasePortugal esandula ukulungiswa, ikwindawo yaseDouro, emantla ePortugal, yenye yezona wayini zidumileyo, iNdawo yeLifa leMveli le-UNESCO kunye nendawo yokuzalwa yewayini yasePort. Yindawo egqibeleleyo yokukhwela intaba kwaye ukonwabele iNdalo. Iindwendwe zisetyenziselwa kuphela iphuli yabucala, igadi entle, kunye nebarbecue.
Le yindawo yasemaphandleni yasePortugal ngeyona ndlela ibalaseleyo kangangokuba abaninzi bayayithanda!
Le ndlu, eseDouro Valley, ibuyiselwe ngokupheleleyo. Umhombiso wenzelwe umntu, kodwa uzama ukugcina imvelaphi kunye nesithethe sasekhaya. Indlu eqhelekileyo yoMmandla weDouro.
Indlu inendawo encinci eluhlaza, ilungele ukosa inyama kunye nokutya ngaphandle. Itafile, izitulo ezi-4 kunye ne-sunshade onayo kwi-terrasse. Indawo egqibeleleyo yokujonga indlela yobisi. Ibarbecue ematyeni iyafumaneka kwi terrasse.
Indlu inika ichibi labucala, ukufudumeza kunye ne-air conditioning. Umgangatho osezantsi unamagumbi amabini okulala amabini, igumbi lokuhlambela eli-1 (ishawa, i-lavabo & nendlu yangasese) nangaphezulu: igumbi lokuphumla elikhulu elinye elinendawo yomlilo kunye negumbi lokuhlambela eli-1 (ishawari, i-lavabo & nendlu yangasese). Ikhitshi ixhotyiswe kakuhle: izinto ezi-2 zokufudumeza ukupheka, ifriji, i-microwave, umatshini wekofu, ...
Le ndlu ikwingingqi yeDouro, emantla ePortugal, yenye yezona ndawo zidumileyo zewayini zeli lizwe, iNdawo yeLifa leMveli ye-UNESCO, indawo yokuzalwa yewayini yasePort, kunye nengingqi yokuqala yewayini ecandiweyo emhlabeni. Uya kukwazi ukubona iindawo eziqhelekileyo zendawo yaseDouro: umlambo waseDouro, iindawo zokuchithela iwayini (i-Quintas), amasimi omthi womnquma, imithi ye-orenji, imithi ye-almond (elona xesha lifanelekileyo lokubona le mithi kwiintyatyambo ngoFebruwari / Matshi). Kwaye uya kufumana incasa yokwenyani yeorenji xa uza kutya enye ngqo emthini. Unokufumana iiorenji ezivuthiweyo ngaphezulu okanye ngaphantsi unyaka wonke. Ivumba leentyatyambo zemithi eorenji nalo liyamangalisa.
4.90 · Izimvo eziyi-50
Umbuki zindwendwe ngu- Sofia
I'm completely passionate about the Douro region, its climate, landscape, wine, food and people. I love promote the region!
Inombolo yomthetho: 55828/AL
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Freixo de Espada à Cinta Municipality